31/10/2018 admintriatra 0
Kandidà miisa telo no vahinin’ny fandaharana Tapatapak’ahitra andiany fahadimy, vokarin’ny haino aman-jery On Air TV. Tabera Randriamanantsoa, kandidà laharana faha- 5 anatin’ny bileta tokana, Radavidson Andriamparany laharana faha- 9, ary Andriantseheno Marcelin laharana faha-7 no …Tohiny
Fokontany Ankasina : Tsy tomombana ny lisi-pifidianana
Diso fanantenana ny ankabeazan’ny mponina ao anatin’ny sektera telo, eny amin’ny fokontany Ankasina noho ny fahaverezana zo. Zara raha misy iray amin’ny olona sivy isan-tokantrano no tafiditra ao anatin’ny lisi-pifidianana. Mampiaka-peo eny anivon’ny fokontany ireo …Tohiny
Lalana Tsarasaotra – Ivato : Hisokatra ny volana novambra izao
Ho afaka ny adin-tsain’ireo mpampiasa lalana amin’ny fitohanan’ny fifamoivoizana mihazo an’Ivato. Araka ny fampitam-vaovao teo anivon’ny minisiteran’ny Asa Vaventy (MTP), hisokatra ary ho vita sy hifarana amin’ny voalohan’ny volana novambra izao ny lalam-baovao mampitohy an’i …Tohiny
Faritra Analamanga : Ankizy 500 ahiana ho voan’ny kitrotro
Mitombo isa hatrany ireo ankizy ahiana ho voan’ny aretina kitrotro eto Madagasikara. Ho an’ny eto amin’ny faritra Analamanga izao,dia nahitana fiakarana ny tahan’ireo ankizy voa, rehefa natao ny fitiliana teto Antananarivo Renivohitra, Antananarivo Avaradrano, Atsimondrano …Tohiny
Mihenjan-droa ny tady eo amin’ireo mpivarotra anaty trano voatokana ao anatin’ny Esplanade Analakely sy ny Kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA), amin’izao fotoana izao. Raha ny vaovao voaangona, mikasa ny handrodanana ilay trano fivarotana voatokana ao amin’ny ...Tohiny